इन्द्रेणी जस्तै झिलीमिली नेपाली संस्कृति बचाउने कसले ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
इन्द्रेणी जस्तै झिलीमिली नेपाली संस्कृति बचाउने कसले ?
असार ३०, २०७५ शनिबार १२:४४:७ | बैरागी काइँला
म भाषाहरुको ज्ञाता त होइन, संस्कृतिको विज्ञ पनि होइन । तर एउटा कुनै भाषा बुझ्छु, कुनै एउटा संस्कृतिको अनुशरण गर्छु । हाम्रो मुलुक परिवर्तनको एउटा दौडमा अगाडि बढ्दैछ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनको हाम्रो आकांक्षा, विकासप्रतिको हाम्रो चाहना र प्रतिवद्धता, मुलुकलाई मात्रै होइन विश्वलाई शान्तिपूर्ण बनाउन हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ ।
उचित संरक्षण र वक्ताको अभावमा हामीले जान्दाजान्दै यो १५–२० वर्षमा झण्डै ६–७ वटा राईको भाषा लोप भैसक्योे । ती भाषा लोप हुँदा त्यसले बहन गरेर ल्याएको सांस्कृतिक भावना र सम्पदाहरु लोप हुँदै गए ।
त्यसको थालनी हामी आफैले गर्ने हो, त्यो पनि आफ्नै ठाउँबाट । मैले देखेको एउटै समस्या छ । म सधैँ एउटै कुरा गर्छु । त्यसैले तैँले सधैँ एउटै कुरा बोलिस् पनि भन्नुहुुन्छ धेरैले । नेपाली समाजको सन्दर्भमा एउटा समस्या छ । हामीले एकले अर्कालाई राम्ररी चिन्न नसक्नु नै ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । भौगोलिक एकीकरण भयो । भानुभक्तले रामायण जनताले बुझ्ने र लोकको भाषामा लेखेर नेपाली भाषालाई लोकप्रियता प्रदान गर्दै विविधतापूर्ण यो देशमा एउटा सम्पर्क भाषाको रुपमा विकास गरेर ठूलो योगदान दिनुभएको छ । तर पनि हाम्रो मुलुक भौगोलिक हिसाबले हिमाल, पहाड भित्री तराई र तराई गरी विविधता भएसँगै सांस्कृतिक हिसाबमा पनि त्यति नै विविधतापूर्ण छ हाम्रो देश ।
हामी भन्छौँ – एक हुनुपर्यो, एक हुनुपर्यो, एक हुनुपर्यो । एक हुने विभिन्न तरिका र परिपाटी छन् । त्यसमध्ये एउटै मेल्टिङ पटमा हालेर एक हुने कि ? विविधतापूर्ण चिजलाई अंगिकार गरेर एक हुने ?
भौगोलिक विविधताले वातावरणदेखि लिएर जीवजन्तु, वनस्पतिमा ल्याएको जुन विविधता छ त्यसको असर यो भूगोलभित्र बस्ने विभिन्न जाति, तिनले बोल्ने भाषा र संस्कृतिमा पनि पर्दछ । हामी एउटा कुरामा बढी जोड दिन्छौँ । हामी भन्छौँ – एक हुनुपर्यो, एक हुनुपर्यो, एक हुनुपर्यो । एक हुने विभिन्न तरिका र परिपाटी छन् । त्यसमध्ये एउटै मेल्टिङ पटमा हालेर एक हुने कि ? विविधतापूर्ण चिजलाई अंगिकार गरेर एक हुने ? यो एउटा समस्या हो । जसरी हाम्रो मुलुक भौगोलिक विविधता भएको देश हो । त्यसरी नै भाषिक र सांस्कृतिक रुपमा पनि हाम्रो देशमा विविधता छ ।
जसरी हामी हाम्रो बायो–डाइभर्सिटीमा गर्व गर्छौँ, त्यसरी नै भाषिक, सांस्कृतिक तथा जातीय विविधतामा गर्व गर्दै यसलाई अझ बढी शक्तिको श्रोत बनाउनुपर्छ । यसको लागि हिमालदेखि दक्षिण विशेषगरी महालंगुर क्षेत्रमा विद्यमान संस्कृतिहरु, संस्कृति अनुशरण गर्नेहरु, तिनले समाजमा पारेका प्रभाव र नेपाली समाजको संरचनामा तिनको उचित स्थान हामीले खोज्नुपर्छ ।
अब त जनसंख्या पनि बढ्यो, तराईका वनजंगल पनि सिद्धिए, पहाडका वनजंगल पनि सिद्धिए । हामी गाउँघरका मान्छेले चटक्क मुटु नै खाने गरी बिमार हुँदा वनकोले भेट्यो भन्थ्यौँ । त्यो वनको देउतालाई मन्साउनका लागि हाम्रा धामी झाँक्री, फेदाम्बा, साम्बाहरुले मन्त्रहरु पढ्थे । र उनीहरुलाई चित्त बुझाएर पठाउथेँ । हामी कतिपय जाती पनि हुन्थ्यौँ । अब जंगल छैन, वनमा देउता छैन । ठिकै छ एउटा कुखुरा बच्यो । दुइटा मान्द्रा बच्यो ।
हामीले सरसर्ती हेर्दा पश्चिम पहाडमा अत्याधिक भाषिक विविधता देख्छौँ । पूर्वी तराई हेर्यो भने पनि भाषिक विविधता उत्तिकै देखिन्छ । यसरी नै देशैभर जातीय विविधता पनि उत्तिकै रहेको छ । त्यसो त पूर्वी पहाडमा पनि भाषिक विविधता रहेको छ । तर हामीले किराँती भाषामध्ये राईलाई एउटा भाषा मानेर हिँड्दाखेरी अलि थोरै बनेको हो । नत्र उचित संरक्षण र वक्ताको अभावमा हामीले जान्दाजान्दै यो १५–२० वर्षमा झण्डै ६–७ वटा राईको भाषा लोप भैसक्योे । ती भाषा लोप हुँदा त्यसले बहन गरेर ल्याएको सांस्कृतिक भावना र सम्पदाहरु लोप हुँदै गए । यसको उचित संरक्षणका लागि वक्ताहरुको समूहले देखाउनु पर्ने जागरुकता त छँदैछ, त्यसमा राज्यले दिनुपर्ने संरक्षण अहम कुरा हो ।
यसमा राज्यले जति दिएको छ पर्याप्त भएको छैन । एक पटक एक ठाउँमा मैले एउटा सानो गफ सुनाएँ । अब त जनसंख्या पनि बढ्यो, तराईका वनजंगल पनि सिद्धिए, पहाडका वनजंगल पनि सिद्धिए । हामी गाउँघरका मान्छेले चटक्क मुटु नै खाने गरी बिमार हुँदा वनकोले भेट्यो भन्थ्यौँ । त्यो वनको देउतालाई मन्साउनका लागि हाम्रा धामी झाँक्री, फेदाम्बा, साम्बाहरुले मन्त्रहरु पढ्थे । र उनीहरुलाई चित्त बुझाएर पठाउथेँ । हामी कतिपय जाती पनि हुन्थ्यौँ । अब जंगल छैन, वनमा देउता छैन । ठिकै छ एउटा कुखुरा बच्यो । दुइटा मान्द्रा बच्यो । तर फलाकेको कुरामा जुन साहित्य थियो, सांस्कृतिक सम्पदा थियो, त्यो पनि त लोप भयो ।
म जान्दिनँ उनीहरुको भनाईको तान्त्रिक अर्थ के हो ? एउटालाई रुघा लाग्यो देखाएँ, फलाक्यो फलाक्यो अनि भन्यो– तँ बाँदरले यसलाई समातेछस् खोक्तैछ, तँ जा । मलाई हिर्काउँदै, बाँदर देख्दैछ, तँलाई पैयुँको लट्ठीले हिर्काउँछु । के सम्बन्ध छ रुघाखोकी र पैँयुको काठको ? हाम्रो यो इन्डिजिनियस नलेज सिस्टमको कुरालाई हामीले हाम्रा भाषाहरुको लोपसँगै यीनलाई पनि दिनप्रतिदिन गुमाउँदैछौँ ।
लिम्बूको श्रुति परम्परामा गाउने मुन्धुममा प्रसंग आउँछ, दाजुभाइको झगडा हुँदा दाजुलाई मार्नलाई काँडामा बिख हाल्नुपर्यो भने बिख माग्नलाई डाँफे चराकोमा पुग्छ । किन ? एउटा झार हुन्छ, त्यो अत्यन्तै विषालु हुन्छ । त्यो डाँफेले खानेरैछ । हाम्रो जुन जातीय ज्ञानको पद्धति र प्रणालीहरु छन्, सम्पदाको रुपमा रहेका छन् । नेपालका भाषाहरु दिनप्रतिदिन लोपोन्मुख मात्रै होइन, मृत्योन्मुख मात्रै होइन, भाषाशास्त्रीहरुको कुरा पत्याउँदा एउटाले २०५० सालतिर नै एउटा किताब निकालेको हो । हरेक हप्ता एउटा र आधा भाषा मर्दैथ्यो भन्थ्यो ।
विश्वका सात हजार सात सय भाषामध्ये प्रतिहप्ता डेढ वटा भाषा मर्यो भने अहिलेसम्म कति भाषा लोप भए होलान् । नेपाल एकेडेमीले एउटा राई भाषाको लागि एउटा योजना बनाएर पठायो । अन्वेषकहरु पुगे फिल्डमा । फर्केर आएर सबै खातापत्र बुझाउँदै भने – एउटा वक्ता थियो त्यो पनि रोजगारीका लागि अरबतिर पसेछ । राजामाने एउटा वक्ता थियो उ पनि अरब पस्यो । यसरी हाम्रो भाषा, त्यो भाषाले बोकेको सांस्कृतिक सम्पदा प्रतिदिन लोप हुँदैछ ।
युनेस्कोले आफ्नो घोषणापत्रमा संसारका विविध जातिको संस्कृति र परम्परामा भएको महत्वपूर्ण कुराहरुलाई मास्टर पिसेज अफ् वर्ल्ड हेरिटेज भनेर संरक्षण प्रदान गर्छ जसरी हाम्रो हनुमान ढोका, पशुपतिनाथ, पाटन दरबार स्वायरलाई सहयोग गरिरहेको छ ।
सांस्कृतिक हिसाबले अत्यन्तै झिलिमिली छ हाम्रो यो देश । यो झिलिमिलीलाई बचाउनु पर्यो । मैले अघि नै पनि भने एउटै मेल्टिङ पटमा राखेर सबै धातुलाई एउटै बनाउने कि ? एउटा चाहिँ हामीले औँठी लाएझैँ रोग, क्रोध र नक्षत्र पन्छाउन भन्दै पाँच वटा धातु राखेर सबैले त्यो फलाम रहेछ, त्यो पित्तल रहेछ त्यो सुन रहेछ, त्यो तामा रहेछ, त्यो चाँदी रहेछ भनेर सबैले चिन्ने औँठी बनाउने हो कि ? हाम्रो मुलुकको संस्कृतिलाई हामी इन्द्रेणी संस्कृति भन्छौँ । सबै संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा हरेक नेपालीले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।
–वरिष्ठ कवि बैरागी काइँलाले मदन भण्डारी कला साहित्य प्रतिष्ठानले भानुजयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेको हिमवत् खण्ड कला साहित्य सम्मिलनमा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।
अन्तिम अपडेट: पुस २६, २०७५
वैरागी काइँला आयामेली आन्दोलन (२०२०) मार्फत साहित्य क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने साहित्यकारको रूपमा चिरपरिचित नाम हाे ।
नेपाली समर्थकलाई मेस्सीको सम्बोधन !
ओली, प्रचण्ड र उपेन्द्र : श्री ३ को सरकार !
साउन १९, २०७५ शनिबार
‘गोपी’ निर्माण युनिटद्वारा ‘कविता प्रतियोगिता’का विजेताहरू प...
धनगढी प्रिमियर लिग : घरेलु टिम अन्तिम खेलमा रुपन्देहीसँग ३९ ...
१० वर्षीया बालिका बलात्कार प्रयासको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ
शिवम् सिमेन्टकाे आईपीओ निष्कासन
रुपन्देहीले धनगढीलाई दियो १०७ रनको लक्ष्य
रेष्टुरेण्टले लिने १० प्रतिशत सेवा शुल्क : कतै पैसा असुल, कतै...
हिउँमा अलपत्र परेका ७०० पर्यटकको कालिञ्चोकबाट उद्धार
थामखर्क विमानस्थलमा हप्ताको दुई दिन उडान
कुवेती दिनारको भाउ केही बढ्यो, अरु विदेशी मुद्रा आइतबारकै म...
मौसम : पुनः वर्षा र हिमपातको सम्भावना
‘लाहुरे’ हुने सपना त्यागेर लोक गायनमा जमेका रामजी खाँड भन्छ...